Home News Xil Mahad Salad”Saxibo yalow inta iska dhaftan bola-xuftada qadoyinka, shirarka jaraa’id iyo...
Xil Mahad Salad”Saxibo yalow inta iska dhaftan bola-xuftada qadoyinka, shirarka jaraa’id iyo nambarada benta ah ee la isku dhufsanayo moshinkina miska so sarta”
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa si Cajiib ah ula hadlay Xildhibaanada iyo Wasiirada Ra’iisal wasaare Kheyre ee mooshinka ka wada Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari iyo Xildhibaanada Manta qadada yeeshay.
Halkaan Hoose ka Akhriso Qaraalka:-
Kulahaa “197 Xildhibaan” ayaa maanta iskugu yimid kulankii qadada ahaa ee ay soo agaasimeen Wasiirada Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre!
Waxaan ugu bishaareynaynaa saaxiibadeen in Gudoomiye Jawaari aqbalay in cod loo qaado. Tirada ay u baahanyihiina ay tahay 184 cod oo kaliya.
Sidaas daraadeed, saaxiibo yaalow inta iska dhaaftaan boola-xuuftada qadooyinka, shirarka jaraa’id iyo nambarada beenta ah ee la isku dhufsanayo mooshinkiina miiska soo saarta, noona ogolaada inaan cod ku kala baxno. Maadaama tiradii aad u baahnaydeen mid ka badan aad haysataan sida aad isku sheegteen.
HADII KALE SAAXIIBO YAALOW MASAAJIDKA CIYAARTA KA DAAYA!a